Igumbi le-Organic Farm 2 - I-Airbnb
Igumbi le-Organic Farm 2
Ipulazi lezinto eziphilayo elilawulwa umndeni elinendawo yokuhlala kanokusho.
Iphethwe umndeni ohlala kule ndawo ukuze izwakale njengekhaya, kodwa futhi inazo zonke izinsiza ongazilindela ngehhotela.
Sinamagumbi angu-6 angasese anamagumbi okugeza anamathiselwe, i-AC, amanzi ashisayo, ne-wifi.
Sicela ufunde incazelo enemininingwane ukuze uqonde amanani ethu. Qaphela: Amanani ngesikhathi se-Pushkar Fair 2019 (Nov 2 - Nov 15) aphezulu kunamanani avamile.
Siyipulazi elisebenzayo elisekelwe kumasu endabuko akudala akuvumela ukuthi ujabulele ukudla namasiko endawo ngendlela "isivakashi esivamile" angeke akwazi ngayo.
Ipulazi elithulile, elinokuthula ukuze ujabulele ukuphumula izinsuku ezimbalwa phakathi nesiphithiphithi kanye nokugcwala ngokweqile kwezinzwa zohambo lwakho oluvamile lwase-India. Izivakashi eziningi zichitha isikhathi zingadini nechibi, zidlala nezilwane, zifika ekhishini ukuze zifunde ukupheka kancane, futhi zijabulele ukuphuma/ukushona kwelanga.
Sidla esikulima epulazini: Sinezinkomo, izimbuzi, izinkukhu, izinja, amahhashi, izinhlanzi, insimu enkulu yemifino namakhulu ezihlahla zezithelo. Sitshala okusanhlamvu kwethu, sikhiphe amafutha ethu (amakinati, lwesinaphi, imbewu kasesame), bese sipheka lezi zithako kancane ngezindlela zendabuko.
Senza kuphela ukudla okunempilo, okwenziwe ekhaya, kwendabuko. Itshalwa emapulazini, futhi iphekwa kancane ize iphelele...Njengoba izinto ezinhle zithatha isikhathi ukuzenza, sicela wazise ngokudla kusenesikhathi. Awekho ama-oda emizuzu yokugcina azokwamukelwa. Futhi, ukudla kuphekwa abesifazane basesigodini abangatholakali ngaso sonke isikhathi (ukuzalwa, izinkathi zokuhlwanyela / zokuvuna, ezinye izinkinga), ngakho hlola kusengaphambili ukuthi ikhishi livuliwe yini ngalezo zinsuku.
Amanani kanye Nezikhathi
Ukudla kwasekuseni, 8:30-10:00 AM, 500 umuntu ngamunye
Isidlo sasemini, 12:00-1:00 PM, 600 umuntu ngamunye
Isidlo sakusihlwa, 6:00-7:30 PM, 600 umuntu ngamunye
Akukho ukudla noma isiphuzo esivela ngaphandle okuvunyelwe ngaphandle kwemvume. Ukudla kwendabuko kwaseNdiya kuphela okusebenzisa izithako ezivela emapulazini. Ngakho-ke, ayikho i-pizza, i-pasta, i-ketchup, njll.
Sisebenzisa izipesheli phakathi nesizini engasebenzi ukuze ukwazi ukubuza ngezaphulelo uma zikhona.
Ipulazi litholakala edolobhaneni laseGanahera (Ganaheda) elingaphandle kwePushkar (cishe i-1.5km ukusuka echibini lasePushkar, kanye neBrama mandir). Umuntu unezinketho ezingu-2: hlala nedolobha lasePushkar elinomsindo, elingcolile kodwa likwazi ukuya kuyo yonke into engaphakathi kwedolobha - ichibi, i-mandirs, amakhefi, njll. Izingane ezincane zama-hippi-ish kubhajethi zivame ukukhetha lokhu. Noma, hlala ezindaweni ezingaphandle kwedolobha ezinamachibi okubhukuda, izingadi, futhi ngokuvamile azimatasa kangako. Isixuku esidala (30-60ish) ngokuvamile sikhetha lokhu. I-Ganaheda iseduze ngokwanele (1.5km) ukusuka enkabeni yePushkar, kodwa kude ngokwanele ukuthi umuntu angathola impilo yasepulazini.
Kuyajabulisa ukusiza ngezicelo ezijwayelekile ezenziwa izivakashi:
+ okufanele ukwenze: ikakhulukazi, uhlu lwangaphakathi, hhayi izinto ezijwayelekile zokuvakasha
+ ukuya nokubuya; izindaba zokuhlela, amanani e-India, indlela yokuxoxisana, ukuqasha amatekisi, njll
+ imibuzo ethokozisayo mayelana nokulima, ukudla, ukupheka, i-Ayurveda, imikhuba yakudala yamaNdiya